Tantaran’ny fahaterahan’i Jesosy – Tsodrano
Tantaran’ny fahaterahan’i Jesosy
Filazantsara telo milaza amin’ny fomba samihafa ny fahaterahan’i Jesosy.
>>> Ao amin’I Matio: Nofy no nampahafantarana fa mitoe-jaza i Maria. Lalina izany.
Matio 1 :
18 Ary ny nahaterahan’i Jesosy Kristy dia toy izao : rehefa nanaiky Maria, renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy amin’ny Fanahy Masina izy. 19. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy ta-hanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. 20 Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho taminy tamin’ny nofy ka nanao hoe : Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao ; fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy Masina, 21 ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe : Jesosy ; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. 22. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany hoe « : Indro ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy ; Ary ny anarany hataon’ny olona hoe Imanoela (Isaia7 :14), izany hoe : raha adika « Amintsika Andriamanitra » 24 Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin’ny torimasony, dia nanao araka izay nadidian’ny anjelin’ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny.25 Ary tsy nahalala azy izy mandrapiterany Zazalahy ; ary ny anarany nataony hoe : JESOSY
>>>Ao amin’I Marka tsy nisy filazana ny fahaterahan’i Jesosy fa tonga dia ny fiandohan’ny asany.
Ny niandohan’ny filazantsaran’i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin’i Isaia mpaminany ….
>>> Eto amin’ny Lioka dia ny anjely no nanambara ny hahaterahan’I Jesosy
26: Ary tamin’ny fahenim-bolana dia nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, 27 ho any amin’ny virjina anankiray, izay voafofo ho vadin’ny lehilahy atao hoe : Josefa avy tamin’ny taranak’i Davida; ary ny anaran’ny virjina dia Maria. 28 Ary nony niditra tao aminy ilay anjely, dia nanao hoe: Arahaba ry ilay nohasoavina , ny Tompo momba anao. 29 Ary taitra loatra izy noho ny teniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitr’izany fiarahabana izany.
30 Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fitia tamin’Andriamanitra ianao. 31 Ary, indro, hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe : Jesosy….
35 Ilay anjely nanao hoe “ Ny Fanahy Masina tonga ao aminao, ary hisy herin’ny Avo Indrindra hanaloka anao; koa ny Masina izay haterakao dia atao hoe Zanak’Andriamanitra. ….
Ary tamin’izany andro izany dia nisy didy navoakn’i Aogosto Kaisara hampanoratara ny anaran’ny vahoaka rehetra amin’ny fanjakany. 2(Izany no fanoratanana voalohany natao fony Kyrenio nanapaka tany Syria). 3 Dia samy nankany amin’ny tanànany avy izy rehetra mba hosoratana.
4.Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia, dia avy tao an-tanàna Nazareta, hakany Jodia, ho ao an-tanànan’i Davida, izay atao hoe : Betlehema (satria avy tamin’ny taranak’i Davida sy ny mpanakaviany), 5 mba ho soratana izy sy Maria fofom-badiny, izay efa bevohoka.
6 Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro hahavelomany. 7 Ary niteraka ny Lahimatoany izy, dia nohodidininy lamba-jaza ka nampandriny teo amin’ny fihinanam-bilona; fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny.
156 591 visites